TIFF 2021: 'Ị bụghị nne m' na -enye egwu ezinụlọ
Mbido Ihe nkiri egwu TIFF 2021: 'Ị bụghị nne m' na -enye egwu ezinụlọ
by Kelly McNeely September 14, 2021
by Kelly McNeely September 14, 2021 169 echiche
Onye edemede/onye nduzi Kate Dolan Ị bụghị nne m bụ ihe na -atụ ụjọ na akụkọ ọdịnala Ireland na -agbanwe agbanwe, yana njiri mara nke mbụ. Emebere ya na obere mmefu ego ma dochie ememme Samhain, ọ bụ mpụta izizi dị egwu sitere na Dolan (onye obere ihe nkiri ya Mbibi dị na Shudder, maka ndị nwere mmasị).
Ị bụghị nne m na -eso Char (Hazel Doupe), nwa agbọghọ dị jụụ nke na -ebi ndụ owu na -ama. Nne ya naanị ya bụ Angela (Carolyn Bracken) na -enwe nkụda mmụọ nke na -edinakarị ya n'àkwà na enweghị ike ịrụ ọrụ ya dị ka nne ma ọ bụ nna. Mgbe ụtụtụ ọrụ na -adịghị ahụkebe, Angela furu efu, gbahapụrụ ụgbọ ala ya n'ọhịa. Mgbe ọ lọtara, ọ dị ka… adịghị mma. Omume ya, ọnọdụ ya, na agwa ya niile na -agbanwe n'ụzọ pụtara ìhè. Enwere ihe ijuanya banyere mama, Char na -eji nwayọ abịa na njedebe na -atụ egwu. Nke a abụghị nne ya.
Doupe na Bracken nwere kemistrị mara mma nke na -amalite ka ihe nkiri na -aga n'ihu. Na ihe nkiri mbụ, Char na Angela nwere mgbidi achọpụtara n'etiti ha nke na -akọ akụkọ ọjọọ; A na -eli Angela n'azụ akwa na iberibe iberibe, Char akwụsịkwala ịgbalị igwu ya.
Mgbe Angela pụtara ọzọ mgbe ọnụnọ ya dị omimi, Char amaghị ka esi anabata nlebara anya na mberede nke nne ya. Dị ka nwa ọ bụla a gbahapụrụ agbahapụ, ọ na -enwe obi ụtọ na nne ya yiri ka ọ lọghachikwutere ya - na -enwe mmetụta uche ma na -asa ya na mmetụta ịhụnanya nke ọ na -agụsi ya anya. Mana n'otu oge ahụ, enwere nkụda mmụọ ikwere na ya n'ezie. Doupe dị oke egwu na ntule nke mmetụta ndị a na -asọ mpi. Ọ na -ebu ọghọm nke na -atụ egwu karịa ka a na -amataghị Angela n'àgwà ya.
Bracken bụ ihe ịtụnanya, na -enwe oke mmetụta dị iche iche. Ọ na -etinye onwe ya n'ọrụ - n'ụzọ anụ ahụ na n'uche - yana arụmọrụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hypnotic na omimi ya. Nkedo a gosiputara Ingrid Craigie dịka Rita (nne Angela na nne nne Char), onye na -elekọta ezinụlọ. Rita nwere ikike nke ọtụtụ afọ nke ahụ erughị ala na ibu mmetụta uche riri. Omume ya na -adị ka eji ya eme ihe, mana iji bụrụ onye ziri ezi, ọ bụghị akụkọ ya ka anyị na -elekwasị anya.
Ị bụghị nne m bụ ihe nkiri na-aga n'ihu nke nwanyị, nke nwere nkedo ụmụnwanyị na obere mkparịta ụka gbasara agwa nwoke; anyị anaghị anụ maka nna Char, na enweghị atụmatụ ihunanya na -enweghị isi, naanị ilekwasị anya na ọbụbụenyi ụmụ nwanyị. Otu n'ime ndị na -emegbu Char, Suzanne (Jordanne Jones), ji nwayọọ nwayọọ jikọta Char na akụkọ ibe ha na ndụ ezinụlọ nwere nsogbu. Enweghị oge Suzanne nwere obi abụọ ma ọ bụ gọnarị Char, ọ bụ naanị ezigbo enyi nwere ọmịiko, nke Char chọrọ nke ukwuu.
Anyị ahụla ka egwu na -agbanwe agbanwe na mbụ (dị ka ihe nkiri Irish ndị yiri ya Ihe dị nsọ na Oghere n'ime Ala), mana enwere ihe gbasara ime ka onye ọjọọ a na -enyo enyo bụrụ nne - kama ịbụ nwatakịrị ma ọ bụ ihe anụ ahụ ọzọ - nke ahụ dị irè.
Angela na -agbanwe ihe nkiri ahụ niile, na -emewanye nke ọma ka oge na -aga. Char hụrụ agwa ndị a dị ịtụnanya, mana o siri ike ịnabata na ihe ọzọ nwere ike bụrụ ihe ọjọọ. N'agbanyeghị nsogbu ha, Char hụrụ nne ya n'anya, na agbanyeghị na omume ya metụtara na enweghị obi mgbawa, ọ na -esikwu ike ị nweta nkwubi okwu na enwere ike ịnwe ihe karịrị ike na ngwakọta, ọkachasị na akụkọ gbasara mmụọ nne ya.
Dị ka Natalie Erika James ' Relic, Ị bụghị nne m na -agbasi mgba ike nke uche na oke na ọrụ dị n'etiti nne na nna na nwa. Dolan ji nlezianya na ọmịiko maka Char na -eto eto, onye nwere mmetụta nke ịnọ naanị ya n'agbanyeghị nkwado nwanne nna ya na nne nne ya na mbọ onye nkuzi ya n'ụlọ akwụkwọ.
Site na akara melancholic ruo ihe nkiri mepere emepe ma na -akpachi anya, Ị bụghị nne m nwere ụda ikuku nke na -agba egwu gburugburu ọdachi, mana ọ naghị anabata ya nke ọma.
Ahụrụ m ezigbo egwu "ntorobịa nọ n'ihe egwu", na Ị bụghị nne m nwere ihe ejikere nke ọma na nke ọma nke trope ahụ. Ọ bụ akụkọ a na-eme n'oge mgbụsị akwụkwọ na-abịanụ nke nwere egwu a haziri nke ọma nke dabere na arụmọrụ, ọ bụghị bọket ọbara.
Ọ bụrụ na ị na -achọ njirimara doppelgänger stellar, jikọọ nke a na Oghere n'ime Ala. Ị gaghị ele ndị ezinụlọ gị anya n'otu ụzọ ahụ.
Maka ihe ndị ọzọ sitere na TIFF 2021, lelee nke anyị nyocha nke Rob Savage's Dashcam